स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? यी हुन् सरल घरेलु उपायहरु – Himalaya TV
स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? यी हुन् सरल घरेलु उपायहरु
२६ फाल्गुन २०७३, बिहीबार १५:२५
काठमाण्डौ, २६ फाल्गुन । सबैका आमाबुबा चाहन्छन् कि आफ्ना सन्तानको स्मरण शक्ति तेज होस् । किनकि स्मरण शक्ति मजबुत हुनेहरुले नै जीवनमा सफलताका सिँढीहरु चढ्ने गर्दछन् ।
यो कुरा केवल विद्यार्थीको लागि मात्र नभई हर उमेरका मानिसलाई जरुरत पर्ने गर्दछ । केही कुरा सम्झिन नसकेर हामीमध्ये कयौं भुलक्कडको नामले लज्जित हुन परेको हुन सक्छ । विशेषगरी धेरै मानिसहरु खास दिन वा मिति भुल्ने गर्दछन् ।
यदि बच्चामा पनि यस्तो समस्या देखियो भने त्यो नराम्रो हो । यसले गर्दा उनीहरुको पढाईमा नै असर गर्ने गर्दछ । यदि बच्चाले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएर पास गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तलका घरेलु उपायहरु अपनाउनु होस् ।
१. बदामः प्रतिदिन तीन चारवटा बदाम खानाले पनि स्मरणशक्ति तेज राख्न मद्दत गर्दछ । यसको प्रयोग बिहान गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । खाली पेटमा यसलाई धोएर खानाले स्मरणशक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ ।
२. दूधः दूध शरीरको लागि पनि फाईदाजनक छ । यदि तपाई नियमित दूधको सेवन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सबै प्रकारको लाभ मिल्छ । यसमा हुने प्रोटिन र क्याल्सियमले गर्दा बच्चाको सम्पूर्ण विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदछ । यदि दूधमा चिनीको सट्टा मिस्रीको प्रयोग गरिन्छ भने झन् राम्रो ।
३. अमलाः अमला एक अमृततुल्य फल हो । यसले शारीरिक र मानसिक रुपमा रहेका विकारलाई हटाएर सकारात्मक असर पुर्‍याउने गर्दछ ।
४. ओखरः ओखर बहुत फईदा गर्ने सुख्खा फल हो । यसले सर्दिमा पनि शरीरमा फाईदा दिने गर्दछ । सकिन्छ भने ओखरसँगै किसमिस दिनुहोस् । यसले सुनमा सुगन्धको काम गर्छ ।
५. तुलसीः तुलसी पूजाको लागि मात्र नभएर यसबाट लाभ पनि लिन सकिन्छ । तुलसीको पात बिहान खाली पेटमा चपाएर खानाले स्मरणशक्ति तेज हुन्छ ।
यसका अलावा ध्यान गर्दा, प्राणायम गर्दा, बिहान चाँडै उठ्दा, एकसरसाइज गर्दा पनि स्मरणशक्ति बढाउन मद्दत पुग्ने गर्दछ ।